MusicHouse မှဂရမ်မီဆုရရှိသည့်အသံထုတ်လုပ်ရန် KRK Monitors ကိုဖိတ်ခေါ်သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » MusicHouse မှဂရမ်မီဆုရရှိသည့်အသံထုတ်လုပ်ရန် KRK Monitors ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်
စတိဗ်မာကန့်တိုနီယိုအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှစီမံကိန်းများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏ V စီးရီးစတူဒီယိုမော်နီတာများနှင့်စီမံကိန်းများအတွက် 10S Subwoofers အပေါ်မှီခိုသည်။
NASHVILLE, 20 သြဂုတ်, 2020 - ဆုရအင်ဂျင်နီယာစတိဗ်မာကန့်တိုနီယိုသည်သူ၏ Nashville အခြေစိုက်စတူဒီယို“ MusicHouse” အားသူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတေးဂီတနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအဆက်မပြတ်အဖြစ်အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။ ကယ်လီကလပ်ဆန်၊ တေလာဆွစ်ဖ်၊ Keith Urban၊ Rascal Flatts၊ Faith Hill၊ Carrie Underwood နှင့် Blake Shelton စသည့်အဓိကတေးဂီတပညာရှင်များအတွက်သီချင်းများရောစပ်ထားသည့်အတွက် Marcantonio သည် Nashville အသံလွှင့်ဌာနတွင်နာမည်ကြီးသည့်အသံအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲသူ၏ရောနှောပေါင်းစပ်မှုများ၏အနက်ကိုကြားနိုင်ရန် Marcantonio ကမှီခိုနေသည် KRK စနစ်များ အမှတ်တံဆိပ်၏ကျော်ကြားသော V စီးရီးစတူဒီယိုမော်နီတာများနှင့် 10S ပါ ၀ င်သည့်စတူဒီယိုလှုပ်စက်များအပါအ ၀ င်စတူဒီယိုမော်နီတာများနှင့်အသံလှုပ်စက်များ။
မာကွန်းတိုနီယိုက“ အသံအနိမ့်အမြင့်မှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီး KRK V4 နဲ့ V8 နှစ်ခုလုံးကိုဒီအဆင့်မှာအံ့သြစရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ “ KRK V10 မော်နီတာတွေကအရာအားလုံးထက်ပိုချစ်တယ်။ သူတို့ကငါ့အိမ်စတူဒီယိုမှာအဓိကဖြစ်လာတယ် V4s များသည်အခန်းကိုတကယ်ပြည့်စေပြီးအောက်ခြေအဆုံးသယ်ဆောင်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်ခွဲခြားခြင်းသည်အလွန်အေးမြသည်။ KRKs သည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောမော်နီတာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ Musichouse၊ Blackbird အကယ်ဒမီ၊ KRK သည်ဒုတိယမဟုတ်ပါ။
Marcantonio သည် KRK စတူဒီယိုမော်နီတာများနှင့်အသံလှိုင်းခွဲစက်များသည်သူရောနှောထားသောဂီတအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသံအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနှင့်အသံအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူကထပ်ပြောသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သံစုံတီးဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရက်ပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြုလုပ်နေပါက KRK သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသံကိုစောင့်ကြည့်သည်။ V စီးရီးစပီကာများသည်ကျယ်လောင်စွာရှုပ်ထွေးပြီးထိပ်တန်း end သည်အသံနှင့်တောက်ပသောအသံဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါတူရိယာများသို့မဟုတ်သံစုံတီးဝိုင်းကိုရောနှောနေလျှင်ငါနှစ်သက်သောအသံနှင့်နောက်ကွယ်ရှိဆူညံသံအားလုံးကိုကြားနိုင်သည်။ KRK မော်နီတာများနှင့်မောင်းနှင်သူများမှာအမျိုးအစားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။ ”
စတူဒီယိုကိုသူတို့၏အိမ်များသို့ယူဆောင်လာနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ယနေ့ခေတ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာရှင်များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသည် Marcantonio က“ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဂီယာကိုဖြုတ်ပြီးချောမွေ့စွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ KRK V4s များဖြင့်ကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်သွားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသံအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏ထူးခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအပြင် Nashville ရှိ Blackbird အကယ်ဒမီတွင်လမ်းညွှန်သူအဖြစ်အနာဂတ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် Marcantonio သည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသူ၏ဗဟုသုတကိုမျှဝေသည်။ "KRK Systems စတူဒီယိုမော်နီတာတွေရဲ့တတ်နိုင်မှုကသူတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှာထင်ရှားစေတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ “ ကျွန်မကကျောင်းသားတွေကိုသူတို့စျေးနှုန်းရဲ့အခြေခံပေါ်မှာထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးကိုမဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့အမြဲပြောတယ်၊ KRK ကတော့ဒါကအကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်ဈေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်သင်ကအရည်အသွေးကိုထိခိုက်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ KRK မော်နီတာများဖြင့်သင်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်, KRK စနစ်များသည် Gibson Pro ကိုပေး Audio ကွဲပြားခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, အရည်အသွေးဒီဇိုင်းနှင့်စတူဒီယိုမော်နီတာ, subwoofer နှင့်နားကြပ်ရဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျမတူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာသည်။ KRK နေပါစေရောနှောဂီတသို့မဟုတ် application ကိုရဲ့ style အိမ်စတူဒီယို၏ကွဲပြားခြားနားလိုအပ်ချက်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယိုကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်ပေးထားပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.krksys.com.
Gibson Brands သည်ကမ္ဘာ့အထင်ကရဂစ်တာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးဂီတအမျိုးအစားမျိုးစုံမှဆင်းသက်လာသောဂီတသံစဉ်များကိုနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပုံဖော်ခဲ့သည်။ Gibson Brands သည် ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Nashville တွင်အခြေစိုက်သည်။ Gibson အမှတ်တံဆိပ်သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်မှုလက်ရာ၊ ဒဏ္musicာရီဂီတမိတ်ဖက်များနှင့်ဂီတတူရိယာကုမ္ပဏီများနှင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောတိုးတက်သောထုတ်ကုန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အမွေရှိသည်။ Gibson Brands အစုစုတွင်နံပါတ်တစ်ဂစ်တာအမှတ်တံဆိပ် Gibson အပြင်ချစ်မြတ်နိုးရဆုံးနှင့်မှတ်မိလောက်သောဂီတတံဆိပ်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ Epiphone, Kramer, Steinberger နှင့် Gibson Pro ကိုအသံဌာနခွဲ KRK စနစ်များ။ Gibson အမှတ်တံဆိပ်သည်အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အသံထူးချွန်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်ဂီတချစ်သူများသည် Gibson အမှတ်တံဆိပ်၏ဂီတကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ www.gibson.com ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာ တွစ်တာ, Facebook က နှင့် Instagram ကို.
KRK စနစ်များ MusicHouse 2020-08-20
ယခင်: Nagoya စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတက္ကသိုလ် (NUCB) သည်၎င်း၏ Online Classes အတွက် ATEM Mini ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်တစ်ခု: WRIGHT သည် GRAVITY MEDIA နှင့်ထုတ်လုပ်မည်၊